Fivoarana amin'ny varotra: paikady enina mandresy fo (sy toro-hevitra hafa!) | Martech Zone
Ny fanoratana taratasin'orinasa dia foto-kevitra iray izay niverina hatramin'ny taloha. Tamin'izany fotoana izany, ny taratasy fivarotana ara-batana dia fironana natao hanoloana ireo mpivarotra isam-baravarana sy ny fari-taniny. Ny vanim-potoana maoderina dia mitaky fomba maoderina (jereo fotsiny ny fiovana amin'ny dokambarotra fampisehoana) ary tsy maningana amin'izany ny fanoratana taratasy varotra orinasa.
Ny sasany fitsipika ankapobeny mikasika ny endrika sy ny singa amin'ny taratasy fivarotana tsara dia mbola mihatra. Izany dia milaza fa ny firafitra sy ny halavan'ny taratasin'ny orinasanao dia miankina amin'ny karazana mpihaino anao sy ny vokatra tianao amidy. Ny halavan'ny mahazatra dia andalana 4-8, saingy mety ho bebe kokoa izany raha toa ka mitaky famaritana marina ny vokatrao, na kely kokoa, ho an'ny tolotra mahitsy kokoa.
Na izany aza, hifantoka amin'ny hacks mahasoa izay tsy vitan'ny manampy anao akaiky ny fifampiraharahana fotsiny fa hahazo ny fon'ny mpihaino anao koa.
Paikady 1: Ampiasao ny mandeha ho azy mba hampifanarahana ny taratasinao amin'ny varotra
Raha tianao ny hahazo ny foo ny varotra varotra ataonao, dia mila miavaka amin'ny fomba maro ianao. Voalohany, mila mamorona zavatra ianao ary manao zavatra manokana. Ny fandefasana naoty an-tànana dia fomba iray lehibe handefasana ny fifampiresahanao, na izany aza, ny fanoratana azy tsirairay avy dia mety handany fotoana.
Soa ihany fa afaka mampiasa a serivisy taratasy nosoratana tanana izay mandeha ho azy ny fizotrany rehetra ary mahatonga ny soratrao hiseho toa ny tanan'olona nanoratra tamin'ny tena penina. Ny fandefasana taratasy raharaham-barotra toy izao, miaraka amin'ny fomba fanoratra manintona, natao manokana, no fomba tsara handraisana ny fon'ny mpandray.
Paikady 2: ampidiro ny porofo ara-tsosialy matanjaka
Tsy misy mivarotra tsara noho ny vokatra nantsoina hoe "manova fiainana" amin'ny hevitra sy ny zavatra niainan'ireo izay nampiasa azy. Tsy midika izany fa mila miodina ny vokatrao, saingy tsy maintsy manana porofo ara-tsosialy matanjaka noforonin'ny feon'ny mpanjifa afa-po izy.
Izany no antony maha-tsara ny mampiditra porofo ara-tsosialy ao amin'ny taratasinao varotra. Ny fanomezana rohy mankany amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny horonantsary dia fomba iray hanaovana an'izany. Ity fomba ity dia voaporofo fa mahomby amin'ny famoahana ny varotra.
Ny fijoroana vavolombelona amin'ny horonantsary ho an'ny mpanjifa dia santatry ny bokotra CTA (Call to Action) izay tokony hapetraka eo ambanin'ny fijoroana vavolombelona. Ny tanjona dia ny fampiasana ny tanjaky ny fihetseham-po tsara sy aingam-panahy izay nahatonga ny fijoroana vavolombelona nataonao ho an'ny mpijery ary omena azy ireo safidy hividy (amin'ny alàlan'ny CTA).
Paikady 3: Ampiasao ireo fitaovana mandeha ho azy LinkedIn
Tsy misy toerana tsara kokoa hampiasain'ny mpivarotra B2B ary handefasana taratasy fivarotana noho ny LinkedIn. LinkedIn dia sehatra fandraharahana midadasika izay ivondronan'ireo karazana matihanina rehetra hianatra, handrindrana, hampitombo ny orinasany ary hamidy ireo vokatra na serivisin'izy ireo. Tsena tsy manam-paharoa izy miaraka amina fotoana maro tokony hitrandrahana ny paikadim-barotrao.
maro Fitaovana automatique LinkedIn afaka manampy anao hanatanteraka ambaratonga ambony amin'ny personalization amin'ny fomba famoronana. Ohatra, ny sasany amin'ireto fitaovana ireto dia manolotra fanaingoana sary mba hahafahanao mampiditra ny anaran'ny mpandray na ny sarin'ny piraofilina ao anaty sary iray, mba hanaovany azy manokana. Ireo fitaovana mandeha ho azy LinkedIn dia afaka manaisotra fampahalalana marina avy amin'ny mombamomba ireo mpihaino kendrenao ihany koa ary mamorona hafatra manokana sy mora arak'izay nosoratan'olombelona.
Paikady 4: Ataovy manokana ny tsipika fanokafana
Fahadisoana lehibe iray rehefa manoratra taratasy fivarotana ny fiarahabana tsy mety. Tsy misy olona mankasitraka veloma toy ny "Ry mpanjifa mahatoky" na "Ry mpamaky malala". Fa kosa, ny mpihaino anao dia maniry ny hahatsapa ho manokana, hajaina ary hitsaboana azy manokana.
Izany no mahatonga ny fampidirana ny anarany sy ny asany (ho an'ny orinasa B2B) amin'ny fiarahabana anao, dia fomba azo antoka hanehoana amin'izy ireo fa tena miresaka amin'ilay olona manokana ianao. Ny fandehanan'i "Dear Ben" na "Dear Doctor Richards" dia hahatonga anao lavitra ary hiantoka ny fanirian'ny mpamaky hamaky bebe kokoa ny taratasinao.
Miaraka amin'ny mpihaino marobe, sarotra ny miresaka an-tanana amin'ny olona amin'ny fomba tsy manam-paharoa ary manoratra ny litera tokana mifanaraka aminy. Izany no mahatonga ny mandeha ho azy mora ampiasaina ary mamonjy fotoana betsaka amin'ny fanangonana tanana ny fampahalalana toy ny anarana, asa, lahy sy ny vavy, sns.
Paikady 5: Mampiasà horonantsary ho an'ny fanentanana anao amin'ny varotra
Ny horonan-tsary dia iray amin'ireo lehibe indrindra endrika atiny mahafinaritra izay mampiroborobo ny fifamofoana ary afaka mandentika ny mpihaino mihoatra ny endrika hafa. Tokony hampiasa azy io ho tombontsoanao ianao ary hampiditra azy ao amin'ny taratasinao mba hampahomby kokoa ny varotrao.
Ny haavon'ny horonan-tsary dia afaka misarika ny sain'ny mpijery avy hatrany ary miresaka fohifohy ireo lohahevitra izay mety ho raketinao amin'ny fampiasana endrika lahatsoratra. Miaraka amin'ny horonan-tsary, azonao atao ny mampiditra ny seho azo ampiharina amin'ny serivisinao amin'ny fihetsika, mampiseho ny fahafaham-pon'ny mpanjifanao, ary amin'ny farany, mifandray lalindalina kokoa amin'ny mpihaino anao.
Fitaovana maro no afaka manampy anao hanao hafatra an-tsary ho an'ny besinimaro miaraka amin'ny sarimiaina manan-karena sy sary mahasarika maso, izay hahatonga ny fiovam-po.
Paikady 6: Mampiasà Timer Countdown
Azonao atao ny mampiditra timer countdown amin'ny mailakao fivarotana satria afaka mamorona fahatsapana fahamehana amin'ny mpamaky izy ireo. Ireo timers ireo dia tokony hapetraka eo an-tampony, eo ambanin'ny lohateny, hatsangana miaraka amin'ny fisehoana manaitra izay misarika ny saina.
Ny tanjonao dia tsy ny hamonjy azy ireo fa ny fampisehoana ny endrika tsara indrindra amin'ny vokatrao ary hamafiso fa voafetra ny fotoana hanaovana zavatra. Izany dia nilaza fa mbola mila manana vahaolana mahomby amin'ny teboka fanaintainany sy fomba mety hanehoana izany ianao.
Ireto misy toro-hevitra fanampiny momba ny varotra
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hahatonga ny taratasim-pivarotana orinasa hahazoanao fo:
Hamarino tsara fa hahafantatra ny mpihaino anao ary zarao tsara izy ireo hahafahanao mahafantatra ny mombamomba azy ireo
Mamorona lohateny sy lohanteny maharesy lahatra mifanaraka amin'ny karazana mpihaino anao
Ampidiro CTA mihoatra ny iray izay voajanahary (ambanin'ny anao fijoroana ho vavolombelona amin'ny horonantsary, amin'ny faran'ny taratasy, sns)
Mampiasà farango hamoronana fihetseham-po amin'ny mpamaky anao
Mampiasà boaty miafina mandritra ny taratasinao mba hamakiany mpamaky bebe kokoa amin'ny hafa vahao izany
Apetraho eo amin'ny pejy voalohany hatrany ny tolotrao
Aza be loatra amin'ny fampahalalana, tsy misy afa-tsy ny zava-misy tsara indrindra, ny fiasa ary ny toetra manokana ananan'ny vokatrao sy ny serivisinao
Mampiasà teknika voaporofo toy ny Boaty Johnson mba hanasongadinana ireo tombony azo avy amin'ny tolotra omenao mandritra ny taratasy
Inona no atao hoe Johnson Box?
Enimpolo taona lasa izay, Frank H. Johnson, manam-pahaizana momba ny dokam-barotra, dia nanandrana raha toa ka azony atao ny mampiakatra ny tahan'ny valin'ny varotra amana azy amin'ny alàlan'ny fomba fantatra amin'ny maha-izy azy. Johnson Box. Ny Johnson Box dia milaza ny tolotra amina lohateny ambonin'ilay fiarahabana.
Ny fanoratana fanentanana amin'ny varotra lehibe dia dingana iray mieritreritra sy mitaky be. Tokony hosoratana tsara ny teninao, voalamina tsara ny atiny ary ny fiheverana aorian'ny famakiana dia tokony hiantsoantso hoe "manome lanja ity vokatra ity".
Ho fanampin'izany, ny fampiasana hacks dia hamonjy ny fotoananao ary hanome hitsin-dàlana vitsivitsy hialana amin'ny fanaovana hetsika mavesatra. Ny Hacks dia afaka manampy ny toetran'ny olona sy ny fahaizany mamorona atiny ho an'ny mpihaino anao sy ny mombamomba azy.
Ny kopian'ny varotra matanjaka no fototry ny taratasy fandraharahana mahomby ary ny fampiasana hacks am-paosy no varavarana hahazoana ny fon'ny mpandray.
Tags: taratasy fandraharahanaCountdownTimer Countdownctamail mivantanafrank johnsonteknolojia fanoratana tananasora-tànanaserivisy taratasy nosoratana tananasora-tananany fomba fanoratana taratasy fivarotanaboaty johnsonserivisy taratasyfanoratana taratasymifandray automatiquetsipika fanokafanatoro-hevitra momba ny asa fitorianakopian'ny varotrafanoratana kopiataratasy fivarotanavarotra varotratoro-hevitra momba ny varotrahoronan-tsary ho an'ny fanentanana amin'ny varotra
David Wachs dia mpandraharaha serial, andrana farany nataon'i David, sora-tanana, dia mamerina ny zavakanto very tamin'ny fanoratana taratasy tamin'ny alàlan'ny vahaolana miorina amin'ny robot izay manoratra ao anaty peninao. Namboarina ho sehatra, Handwrytten mamela anao handefa naoty avy amin'ny rafitra CRM, toy ny Salesforce, ny tranonkala, fampiharana, na amin'ny alàlan'ny fampidirana manokana.